XOG RASMI AH: Beesha Caalamka oo war rasmi ah ka soo saaraysa Xaaladda Soomaaliya, kuna hanjabi doonta. – Puntlandtimes
XOG RASMI AH: Beesha Caalamka oo war rasmi ah ka soo saaraysa Xaaladda Soomaaliya, kuna hanjabi doonta.
MUQDISHO(P-TIMES) – Warar ay heshay Puntlandtimes.com ayaa daaha ka rogaya in ay wakiilada caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya oo lahaa sababta loo qabtay kulanka fashilmay ee Hoggaamiyaasha Soomaalidu ku lahaayeen magaalada Garoowe, ay aad uga walaacsan yihiin waxyaabaha dhacay.
Wararku waxay sheegayaan in Wakiilada dawladdaha Mareykanka, UK, Midowga Yurub ay yihiin kuwa ugu badan ee isha gaarka ah ku haya wada hadalada Garoowe ay hadda qaadayaan talaabo deg deg ah oo ku wajahan waxa dhacay.
Safiirka dawladda Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya oo dhawaan Nayroobi kula kulmay dawlad gobaleedyada, si loo xaliyo khilaafka Soomaalida dhexdeeda ah, ayaa ku cadaadiyey in ay Puntland dhigto gogol wada hadal oo halkaas ay ka soo baxaan go`aamo dhiancyadu isku raacsan yihiin.
Fashilka hareeyey shirka Garoowe, ayaa hadda Beesha Caalamku u aragtaa mid banaanka soo dhigay heerka hoggaamineed ee ay dawladda Faderaalka SOomaaliya doonayso in ay ku maamusho dalka, taas oo ay ka soo horjeedaan dawlad gobaleedyada.
Midowga Yurub iyo dawladda Ingiriiska ayaa horey welwel uga muujiyey hab dhaqanka siyaasiga ah ee dawladda Faderaalka, waxayna UK horey u cambaaraysay doorashadii Baydhabo, Xarigii Musharaxiinta qaarkood iyo faragalin ay sheegen in ay wado Muqdisho.
Mid kamid ah Siyaasiinta Soomaalida oo ka gaabsaday magaciisa ayaa u sheegay warsidaha Puntlandtimes.com in si rasmi ah loogu sheegay Madaxweynaha iyo Rayalwasaaraha Soomaaliya in haddii aan wax ka soo bixin shirka Garoowe, ay xaaladda Soomaaliya is bedeli doonto oo ay wax kasta adkaan doonaan.
Warka laga sugayaa Beesha Caalamka ayaa leh walaaciisa, waxaana dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ay ka dhigan yihiin kuwa aan waji wanaagsan u horseedeyn Madaxtooyada Soomaaliya, oo aad uga walaacsan habka ay xaaladdu kusii durkayso.
Hoggaamiyaasha Soomaalida ayaa ku shirsanaa magaalada Garoowe lixdii maalmood ee lasoo dhaafay, waxaana gabi ahaanba guuldareystay shirkaas in ay ka soo baxaan go`aamo ay ku qanacsan yihiin Shacabka Soomaaliyeed.
Dalkeyga kuwa Dminayoow,Dibiin Daabyadiinu igama Dahsoonneee,
Isdiid keyga inaanan isku Duubnaan idinkaa Ukala Dabqaaddeeeeeee,
Dastuur Daleelo Leeh Rayi isdiidaan Baad ku Diirsataanneeeeeeeeeee,
Qabiiladu Halkey Dageen Ayaad u Kala Dabqaadaanneeeeeeeeeeeeee,
Qaranimadeyda,Hadaad Daacad ka Tihiin Hadba Kii iduminaayey
ku Meelgaadh, iiguma Caga Jugleyseenneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Go’Aan kaan Gaadhaba ma Gugateenneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Godol walba,Mid Godob Galbinaaya,Farmaajo Gacanta Ma Geliyeeneee,
Geesh kaygu inuu Gaamurroo, Gacmooley ma Go Aamiseenneeeeeeeee,
Geyigeyga,Guul Dareystuhu, kuwuu u Gacan Geliyey Iney Gaadh iga hayaan
Guno kuma Siiseenneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeee.
Anaa isgabaay, Gondaha gaaleef iskaga Gooyeyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Gobanimadeydii Gaamurtey Anaa Gaagaxsheey,Oo Cadw isu Godoomiyeeee.
Gacal iyo walaal nimadeydii, Anaa Gooyoo,Gegi kaga guuraeeeeeeeeeeeee,
Guul Gaamuraan Galadaan Soo Godlaayaa Guulena Wuu igarab Qabanneeeee,
kuwa Qaranimadeyda, Gondaha Gorada Hayoow,Guuldaraad Guran Doontaanneeee,
Geyigeyga waan idiinka Galab Caraabinee Weligeyga Guno Layguma Gadinneeee,
Waxaan la yaabaa dadka soomaalida ee website ka wax ku soo qoro miyeeysan caqli laheeyn intooda badan aniga markii aan aad maskaxda uga shaqeeysiiyay waxyaabo kooban baa ii soo baxay oo eey ugu horeeyso aqoon diimeed la aan baahsan ineey heeyso dadka websiteka wax ku qoro intooda badan dadkoo dhan yaanan uwada gafin
ilaahay beey aqoon idilkeed u idlaatay bini aadanka markii la fiiriyo aqoontiisa cirbad bada la galiyay waxa soo raaco ma dhama qof oran karaa aniga aqoon baan dhameeyayna waa laga waayay aduunka daciif ayaan kuligeen nahay marka hadalka murtidiisa hadaan u soo dhaco qofka qoraalkaan soo qoray waxuu u hadlay reer galbeedka ineey ilaaha na quudiyo yahiin dad badan oo soomaali ah oo fikradaas aaminsan ayaa buuxo waliba kuwa safka hore fadhiya in aan anaga waxba qabsan karin runta hadii aan u soo noqdo aduunka ilaah ayaa dadka quudiya gaal iyo muslimba waxa uu heeysto ilaah baa siiyay soomaaliya waxa dhibka ugu bixi la dahay waa marka hore in gaalo la aaminay oo in gaal xal u keeni karo dadka inta badan aamineen iyo qabyaalad iyo soomaalidii oo doorta qofka dadka ugu dulisan daneeyste aan dal iyo diin iyo dad aan u naxeeyn waliba kii dadka ugu liitay la amaanayo iyo mid gaalo soo dirsadeen oo jaajuus ah aduunka gaalo iyo islaanba xukun adag ayaa ka yaal qof dalkiisa cadaw u soo hogaamiyo ama cadaw yiraah waa walaalaheen ama jaajuus u noqda waxaan hadal ku soo koobayaa xalka halaga raadiyo in ilaah loo noqdo oo gaalo laga haro soomaaliya waxaa ku filan reer walba wiilkooda ineey bada u dirsadaan bada waxa ku jiro ayaa inaga badan intaan dhulka la fiirin ilaah waxaan ka baryay hadaan wax qalad ah hadalkeeyga ku jiro in ilaah iga cafiyo soomaaliyeey tooso oo yaan idinka la isku kiin garaaciin kan waa teror iyo kan diintuu jecelyahay ma shaqeeyneeyso cid cid maquunin karto ma jirto qofka soomaaliga markii uu wanaag sameeyo oo gaalada wadanka laga saaro oo qof walba qofka walaalkiis xaqiisa u ogolaado markaas ayaa horumar la gaari karaa wa bilaahi towfiiq .
Mahad waxaa leh Allaha caalamiinka oo waxkasta qadarkiisa ku dhacaan oo wax nool iyo wax aan nooleyn quudiya oo daryeela. Taas kasokow gaalo iyo muslim midna somali iskuma dirin. Somali ayagaa doorbiday in ay wado mugdi ah ku caraabaan. Cid kale oo arinkaas lagu eedayn karo ma jiraan. Horta hore somali waa in ay aqbalaan in gafku ayaga ka bilaabmay oo walina kafkaasu ay ayagu daadihinayaan. Malintii somaali qafkeeda garowsato ayaa ilaahey u naxariisan oo roob dhibca waa weyn cirka uga soo di’in. Qaaruumaha aad gaalo ugu wacdaan waa kuwa boqolaalka malyaan somali ku kharashgareeya ayadoo deeqdaasu dayn ahayn. Aawaye ku aad u baroorataan oo walaalah muslimka ugu wacdaan. Waxa kaliya ay somali ku caawiyaan waa maalaayiin doolar ay ku kala dilaan oo ku kala gadaan oo ku jaha wareeriyaan oo ku kala fogeeyaan. Bal aanu isweydiine yaa masruufa argagixisada somaliya ka jidha. Yaa kale aan ahayn kuwa aad walaaleysataan ee dhagaha cas. Waxaan ku talin lahaa in somali kala guudho oo xuduudo kala yeelato intay goori goor tahay oo fursadaasu wali u furan tahay. Waxaa imaandoona wakhti somali la yiraahdo fad ama ha fadin waad kala go’aysaan oo qaaruumo kale ayaad ku kala biiraysaan. Laakin maangaab somaaliyeed maxuu waxas ka fahmin. Ale kasokow wadankasta hogaakiisa sare ayaa wadada fiican ku haga. Mooraayaan markii madax laga dhigto minjaxaabis la’aan ma jirayso.
Gadabay geeyroow waxaan kusoo Gaafmeerey,Gobi waa Gadaan Qabashoowdaa,
Waase Gaamurtaa Godolo Danbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Galado Guulo farxad Aan ku Geeraaro, wey soo Gudboonyihiinneeeeeeeee,
Soomaalaay, idinkuna isgarabsaddaa,waa laydinku Gadaaman yahayeeeeee,
Gacal iyo walaal nimadii,yaaney Gaagixiin,Gunimadiinaa, guno lagu
Godobaha guuldara kala goynta Gacal nimadiinaa La Gabneynayaaeeee,
Dad Gacala Midaab wada ah Luuqad kuwada Gabayaeeeeeeeeee
Geyaan Xigaal isu Garab yaala Ka Gadoode,Gobanimadeena,
kuwa ka Gubanaayeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Mohamed A S C Nooloow walaalkii,
waa saad u dhigtey, Adoomada Alahood Baa Quudiya,
Alle Aamin Ma’iisho Adigu Ahoow Adoon Amarkiisa Adeeca,
isna Quud Qadhaabasho Nolol Qiima Leeh Ku Qadin maayeee,
salaadaha qaayiib Quraan Qayb Qaadir Fardawsadii Qaboobeyd
Aqal Haaga Qotomiyeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Qaadirkii baa nin Qiriwaayey, Quud ka Raadii,Qawadey sidaan
Dalaga Qotaa, Qayrkiin inaad Geley Qudhuntey ka Qaadataan,
Laga Qiima Roonneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee,
Caafimaad Adoo Qabaa, Quwadna Qaadir ku Siiyey,
Qayrkaa, i Quudiii, Qalbiga saw ka Qandho maahaaeeeeee,